Solvent Yero 56 / CAS 2481-94-9
Solvent Yellow 56 idhayi yakatsvuka yero inonyungudutsa.Iine kunaka kwekudzivirira kupisa uye kukurumidza kwechiedza.Inoshandiswa kupenda mapurasitiki, polymer, faibha, rabha, wakisi, oiri, mafuta, mafuta, peturu, kenduru.Ndokumbira utarise TDS yeSolvent Yellow 56 pazasi.
Solvent Yero 33 / CAS 8003-22-3
Solvent Yellow 33 idhayi yakasvibira yero ine simba remhando yepamusoro.
Iyo ine yakanakisa kupisa kupisa uye mwenje kuramba, yakanaka migration kuramba uye yakakwirira tinting simba ine yakakura application.
Solvent Yellow 33 inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polymer.
Unogona kutarisa TDS yeSolvent Yellow 33 pazasi.
Solvent Yero 28 / CAS 5844-01-9
Solvent Yellow 28 idhayi yakatsvuka yero inonyungudutsa.Iine kunaka kwekudzivirira kupisa uye kukurumidza kwechiedza.Inoshandiswa kupenda mapurasitiki, polymer, faibha, rabha, wakisi, oiri, mafuta, mafuta, peturu, kenduru.Ndokumbira utarise TDS yeSolvent Yellow 28 pazasi.
Solvent Yero 14 / CAS 842-07-9
Solvent Yellow 14 idhayi yakatsvuka yero inonyungudutsa.Iine kunaka kwekudzivirira kupisa uye kukurumidza kwechiedza.Inoshandiswa kupenda mapurasitiki, polymer, faibha, rabha, wakisi, oiri, mafuta, mafuta, peturu, kenduru.Ndokumbira utarise TDS yeSolvent Yellow 14 pazasi.
solvent orenji 86 / CAS 81-64-1/103220-12-8
Solvent Orange 86 idhayi yeorenji ine simba remhando yepamusoro.Iine hutano hwakanaka hwekupisa uye chiedza chekudzivirira.Solvent Orange 86 inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA, PC.Unogona kutarisa TDS yeSolvent Orange 86 pazasi.
Solvent Red 111 idhayi dzvuku refluorescent.Iyo ine yakanakisa kupisa kupisa uye mwenje kuramba, yakanaka migration kuramba uye yakakwirira tinting simba ine yakakura application.Solvent Red 111 inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA.aIwo inogona kushandiswa kupenda rabha, wakisi, mafuta, mafuta ekuzora, mafuta, peturu, kenduru.
Unogona kutarisa TDS ye Solvent Red 111 pazasi.
Solvent Red 25 idhayi yakatsvuka yakanyungudutsa, inoshandiswa kupenda mapurasitiki, polima, rabha, wakisi, mafuta, mafuta, mafuta, peturu, kenduru.Ndokumbira utarise TDS yeSolvent Red 25 pazasi.
Solvent Red 24 idhayi dzvuku rekunyungudutsa.Iine kunaka kwekudzivirira kupisa uye kukurumidza kwechiedza.Inoshandiswa kupenda mapurasitiki, polymer, rabha, wakisi, mafuta, lubricant, mafuta, peturu, kenduru.Ndokumbira utarise TDS yeSolvent Red 24 pazasi.
Solvent Green 3 iruvara rwegirinhi dhayi.
Solvent Green 3 inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polymer, fiber.Solvent Green 3 inokurudzirwa kune polyester fiber.
Inogona kushandiswa mukupenda oiri, wakisi, girizi, mafuta, mahydrocarbon anobva paari, polishes, ane mafuta ekuuraya zvipembenene, uye acrylic emulsions.
Unogona kutarisa TDS yeSolvent Green 3 pazasi.
Solvent Blue 35 idhayi yeblue solvent.Iyo ine yakanakisa kupisa kupisa uye mwenje kuramba, yakanaka migration kuramba uye yakakwirira tinting simba ine yakakura application.Solvent Blue 35 inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA, PC.Unogona kutarisa TDS yeSolvent Blue 35 pazasi.